Any atsimo: hapetraka ny « kere data » | NewsMada
Any atsimo: hapetraka ny « kere data »
Nampahafantarin’ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Prof. Rakotovao Hanitrala Jean Louis, ny alatsinainy teo fa hapetraka ilay « kere data » hahafahana manara-maso ireo olona tena tratran’ny tsy fanjariantsakafo mivaivay any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy.Hanamorana ny fanaraha-maso ara-pahasalamana azy ireo no tanjona amin’ny fampiasana ity « kere data » ity. Misy ihany koa ny foibe fanarenana ara-tsakafo sy fitsaboana ao Amboasary, izay hisahana ny fanampiana rehetra any atsimo. Anjaran’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ny mampandeha izany.
Nisaotra ireo Ekipa rehetra nandeha namita iraka tany amin’ireny toerana lavitra ireny ny minisitra ary nambarany, araka izany fa ny fanaovana iraka dia tokony hisy fiantraikany mivantana amin’ny vahoaka hatrany.
Fantatra ihany koa izao fa efa hiroso amin’ny fisokafan’ireo toeram-pandidiana manara-penitra manerana ny Nosy ny minisitera. Tsara ny manamarika anefa fa nanomboka ny 19 novambra ka hatramin’ny 09 desambra ho avy izao dia miato mihitsy ny fitokanana zava-bita rehetra noho ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana loholona.